23 Fikradda Fikradda Fikradda macno leh ee loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
23 Fikradda Fikradda Fikradaha Fikradda ah ee loogu talagalay Raga iyo Haweenka
Doorashada si aad u hesho tattoo waa wax aan waajib aheyn in aan la careysan. Tattoo wuxuu joogi doonaa maqaarkaaga wixii ka hartay noloshaada, haddii aanad u baahnayn inaad la kulanto qalliinka saaritaanka adag. Si kastaba ha ahaatee, tattoos macnaha leh waa mid aad u qurux badan oo aan lumin karin quruxda ku xiran.
1. Tafatiraha ugu macquulsan tattoo - Aabahaaga gacantaada saaraya garabkaygu weligiis wuu ila joogi doonaa weligiis.
2. Tattoo macno leh haweenka - Dhoobo sida barkada oo kale ah sida shinni
Waxaa muhiim ah in haddii tattoo ay ku filnayd wax yar oo ku filan iftiin, markaa waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad sawir qaaddo tattoo kale oo leh tattoo kale. Hase yeeshee, tattoosyada #meaning-ka ah waa kuwo aan la adkeyn karin.
3. Tattoo-macno muhiim ah - Jacaylku wuxuu u qalantaa kaliya hooyo
Fursadda inaad tahay tattoo ugu horeeya waa mid aad u dhib badan, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad leedahay #tattoo kale oo macno leh sida tan.
4. Tattoo macno leh macno leh - Ha ilaawin inaad naftaada u jecesho
Haddii ay dhacdo in aad u baahato in aad hesho tattoo qof magaciisa ku jira jidhkaaga, markaa waa inaad shakhsi ahaan ka mid noqotaa qoyskaaga oo aad jeceshahay oo aad si dhab ah u aasaasay dammiinka qofkaas si uu u noqdo mid macne leh.
5. Wax walbana iima dhigin wax kasta oo aan ahay
Dad tiro yar ayaa laga yaabaa in ay u baahdaan inay helaan saaxiibkoodii saaxiibka / saaxibbada / asxaabta jidhkooda, waana doorashadooda haddii ay sidan sameeyaan iyo haddii kale. Si kastaba ha noqotee, tattoo macne leh, waad kuxaqiijin laheyd.
6. Qoraal fudud oo macne leh oo loogu talogalay dumarka
Sawirada macmalka ah ee loogu talagalay gabdhaha waa mid cajiib ah taas oo ah sababta aad wax uga bedeli kartid jirka
7. Tattoo macnaha ereyada loogu talagalay gabdhaha - Baalashaada ayaa diyaar u ah iibsashada wadnahaygu ma ahayn
Sawirada macneheedu waa mid aad u qurux badan oo macnaheedu yahay inaadan lumin doonin markaad haysato.
8. Ereyga macquulka ah ee fudud oo tifaftiran gabadhiisa
Ka hor inta aan la dhamaystirin tattoo macne leh, waa inaad ka fekertaa waxa aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad u gudbiso dadweynaha ama waxa aad raadineyso inaad gaarto markaad hesho tattoo qurux badan.
9. Naqshad fudud oo tayo fiican leh
Haddii aad ubaahan tahay waxyaabo si gaar ah loogu talagalay tattoo macno leh, waa inaad hubisaa in wax walba oo ku saabsan tattooadaada si xoogan loo qoray.
10. Tattoo eray macno leh macno leh
Haddii aadan ku qanacsanayn waxa ku qoran jirkaada. Waxaa lagugula talinayaa in aad tagto tattoos macna leh oo sida fudud u eg
11. Dheeraad macne leh - Waxaan nahay nolol waxaanuna nahay dhimasho
Uma baahnid inaad u dhaqaaqdo meel fog ka hor intaadan helin tattoo oo macneheedu yahay sidan. Waxaad xitaa qoondeeyn kartaa tattoo macne leh oo aad u qurux badan oo aad u qurux badan.
12. Walaacinta tattoo hadalka macnaha leh
Tattoo macne leh waa wax aad ku qanacsan tahay. Markaad leedahay tattoo sida quruxsan sida tan, dadku had iyo jeer waxay akhriyaan oo rabaan inay kula xiriiraan marka ay arkaan meeleyntaada tattoo.
13. Tattoo eray macno leh - Sheeko kasta waxay leedahay dhammaadka, laakiin noloshii ugu dambaysay waa bilow cusub
Sheeko la'aantu waxay bilowdaa oo u egtahay mid la mid ah waxa ku dhacaya shaati-cabid macquul ah oo micno leh. # Dhajinta sawirada macnaha leh waa qabow iyo farriimaha gudbay sidoo kale waa run.
14. Dad badan oo tifaftiran oo loogu talagalay guys - Dadka qaarkood ma aaminsan yihiin geesiyaal, laakiin ma ayan la kulmin aabahay
15. Tattoo macno leh macno leh - Isbedelka aad rabto inaad aragto aduunka
Haddii ay dhacdo in aad ka fekereyso helitaanka tattoo, tattoo macnaha leh ee gabdhaha waxay noqon kartaa waxaad jeceshahay inaad ka mahad celiso. Taasi waa inta ugu badan ee dumarka waa ka dib markii ay rabaan inay u muuqdaan kuwo qabooba sidoo kale waa fiican.
16. Qormo macno leh - Waxaa laguu siiyey noloshaan sababtoo ah waxaad ku xoogan tahay inaad ku noolaato
17. Tattoo macno leh oo cajiib leh oo cajiib ah oo gabar dib u soo laabtay
18. Tattoo macno leh gabdhaha - Ha iloobin inaad naftaada u jeclaato
Waxba ha kuu diyaarin inaad muujiso inaad naftaada ku soo gashay markaad leedahay tattoo ah tattoo macne leh.
19. Tattoo macne leh
20. Marwalba waxaad joogtaa marxaladeyda tattoo macno leh
21. Tattoo macne leh oo macquul ah - la'aanteed wax horumar ah ma jiraan
22. Fasax macno leh oo loogu talagalay dumarka
23. Fikirka tattoo macnaha ah - Waxaan heli doonaa hab si aan mar kale kuu arko
tattoo maroodigaTattoos Wadnahaku dhaji tattoostattoos iskutallaabtataraagada kubbaddasawirrada raggatattoos cagtatattoos qoortacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTilmaamta jaalaha ahtattoos qorraxdagaraacista gacmahatattoo dheemangadaal u laaboDhaqdhaqaaqatattoos sleevetattoo indhahatattoos saaxiib saxa ahhenna tattootattoos ubaxtattoos qabaa'ilkanaqshadeynta mehndilibto libaaxtattoo ah octopustattoos taajkiitattoos eaglefikradaha tattootattoo tilmaantattoos moonsawirada malaa'igtashimbir shimbirkoi kalluunkaTartoo ubax badantattoos qosol lehTattoo infinitytattoo biyo ahJoomatari Tattoosshaatiinka shiidanwaxay jecel yihiin tattoosTattoo Feathertattoos gacantasawirada gabdhahajimicsiga bisadahalammaanahalaabto laabtawaxaa la dhajiyay tattoossawir gacmeedarrow Tattootattoosmuusikada muusikada